Lamba firakotra: fampiharana mahasoa amin'ny filalaovana feo manodidina ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Lamba firakotra: fampiharana mahasoa amin'ny filalaovana feo manodidina sy maro hafa
Androany, olona maro no mifanerasera tsy tapaka amin'ny solosaina, na amin'ny asa, na amin'ny fialamboly, na amin'ny fialan-tsasatra fotsiny. Ary na dia izany aza dia mazàna izy ireo ihany no mampiasa mihaino mozika na mihaino fotsiny feo mahafinaritra any ambadika ho an'ny hetsika tadiavina. Indraindray izy ireo dia mampiasa tranokala an-tserasera ary amin'ny fotoana hafa dia mpilalao tsotra.
Na izany aza, rehefa tonga milalao tsotra sy mahafinaritra feo avy any ambadika na feon-kira na hira tsotra sy tokana, nantsoina ilay application bodofotsy mety ho fomba mahasoa indrindra io.
Headset: Mpilalao mozika mivezivezy avy amin'ny YouTube sy Reddit
Alohan'ny hidiranao feno hanomezana hevitra bodofotsy, Tsara homarihina fa noho io tanjona io ihany, ny fampiharana "Headset", raha mbola mifandray amin'ny Internet ianao, satria mamela anao hilalao horonantsary Internet amin'ny feo manodidina na mozika tsy misy fanelingelenana amin'ny dokam-barotra.
"Headset dia mpilalao mozika tsotra ho an'ny Mac, Windows, ary Linux miaraka amina fikarohana ao anaty YouTube, efijery an-trano miaraka amin'ny lisitra lazain'ny karazana sy ny fotoana, ary ny tsara indrindra dia ny onjam-peo ampiasain'i Reddit. Headset dia mandray hira izay zarain'ny sub-reddit mozika mihoatra ny 80, manasokajy azy ireo ary milalao azy ho azy. Izy io dia fomba mahafinaritra sy miavaka hitadiavana mozika vaovao satria olona hafa toa anao no mifidy azy fa tsy amin'ny algorithma." Headset: Mpilalao mozika mivezivezy avy amin'ny YouTube sy Reddit
1 Lamba firakotra: fampiharana amin'ny filalaovana feo afara
1.1 Inona ny Blanket?
Lamba firakotra: fampiharana amin'ny filalaovana feo afara
Inona ny Blanket?
Araka ny anao tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, bodofotsy, ity fampiharana kely sy tsotra ity dia nofaritana toy izao:
"Fampiharana mahasoa hihainoana feo hafa. Feo izay afaka manatsara ny fifantohana ary mampitombo ny famokarana ny mpampiasa. Na avelany hatory fotsiny izy ireo ao anaty tontolo mitabataba."
Amin'izao fotoana izao, bodofotsy mandeha amin'ny kinova "0.4.0" ary manana eo aminy endri-javatra miavaka indrindra manaraka:
Fifanarahana sary mahafinaritra, tsotra ary mivantana: Aiza ny mpampiasa dia asiana fanangonana kely feo amin'ny tontolo iainana (Natiora, fitsangatsanganana, atiny, tabataba ary fomba amam-panao) izay azo averina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny bara fitetezana ny volany mba hanitsiana ny haavon'ny volavola tadiavina amin'ny fanirian'ilay mpihaino. Ary zavatra tena ilaina dia ny mamela anao hilalao feo maro tafiditra na ampiana miaraka, mba hahafahana manao mix manokana ho an'ny tsiron'ny mpampiasa tsirairay.
Famerenana amin'ny laoniny eo am-panombohana: Mba hisorohana ny fifandraisana amin'ny interface graphique. Ary atombohy izany, milalao ny fikirakirana feo farany nampiasaina. Io dia ahafahanao manohy milalao ireo toe-javatra ireo aorian'ny fanidiana ny fampiharana.
Kitendry hitsin-dàlana mahasoa: Ho fampiasana mora kokoa, haingana sy mivantana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny kitendry.
Fomba isan-karazany azo ampiasaina amin'ny fisintomana, fametrahana ary fampiasana azy. Ohatra, amin'ny alàlan'ny repositories raha manana a Distro Arch sy OpenSuse, via Repositories PPA raha manana isika Ubuntu Distro na ny derivative na mifanentana amin'ny alàlan'ny Flatpak, ary farany, sintomy izany ary atambaro avy hatrany.
Ho an'ny tranga azo ampiharina anio, dia hisafidy ny làlana farany isika, satria, ny mahazatra antsika MX Linux respin antsoina hoe FAHAGAGANA, na dia manaiky aza izy Repositories PPA, tsy maintsy ampidirintsika tanana amin'ny tanana foana ny lakilen'ny tahiry, ary na dia ekeny aza izany Flatpak, ity dia mametraka fototra mavesatra foana ho an'ny fiasan'ny fonosana.
Noho izany, ny zavatra voalohany dia ny misintona sy manafoana ny fisie "tar.gz" de kinova "0.4.0". Avy eo apetraho ao anaty fampirimana ny tenantsika «~/Descargas/blanket-0.4.0» miaraka amin'ny root terminal. Ary tanteraho ireto baiko baiko manaraka ireto:
Raha misy ny fonosana rehetra ao amin'ny andalana voalohany ary apetraka soa aman-tsara, dia azo sokafana ilay fampiharana. bodofotsy tsy misy olana ao aminao GNU / Linux Distro. Amin'ny fandinihana ataontsika, ny tranomboky «libhandy-1-dev» Tsy tao amin'ny toerana fitahirizan-tsika izany, noho izany dia nakarinay izy io ary napetrakay niaraka tamin'ireo rakitra miankina aminy («gir1.2-handy-1_1.0.0-2_amd64.deb, libhandy-1-0_1.0.0-2_amd64.deb y libhandy-1-dev_1.0.0-2_amd64.deb») avy amin'ireto manaraka ireto rohy ary apetrakay amin'ireto baiko baiko manaraka ireto izy ireo:
Aorian'izany dia tsy afaka mamono afa-tsy isika bodofotsy avy amin'ny Menio fampiharana, zahao izany ary ampiasao. Araka ny hita amin'ireto sary manaraka ireto:
Farany, ho an'ireo izay te-hisintona feo maimaimpoana sy tsy andoavana mpanjaka hampitomboana ny isan'ny vokatry ny feo bodofotsy, azonao atao ny misintona ny sasany amin'ireto rohy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Blanket», kely Rindrambaiko playback feo manodidina, sy ny hafa rakitra sy mozika amin'ny haino aman-jery multimedia amin'ny endrika samihafa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra miasa sy maimaim-poana; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Lamba firakotra: fampiharana mahasoa amin'ny filalaovana feo manodidina sy maro hafa
BTColor: script kely hanatsarana ny GNU / Linux Terminal
Valim-pitia mahery fo na ahoana no hiditra amin'ny tontolon'ny cryptomaso nefa tsy handany vola